BEN TRE - Cochinchina - Ny Tany Masin'i Vietnam Studies
Ny faritanin'i Bentre [Ben tre] natsangan'ny nosy roa: ny nosy Minh, izay eo anelanelan'ny Co Chien [Cổ Chiên] ary ny Hamluong [Hama lượng] ony, ny tapany avaratra ahitana azy Vinhlong [Vinh Long], ary ny nosy Bao, eo anelanelan'ny Hamluong [Hama lượng] ary ny EFITRANO [Ba Lai]. Voafetra amin'ny avaratra sy avaratra-atsinanana izy io mytho [Mỹ Tho], any andrefana by Vinhlong [Vinh Long], any atsimo-andrefana by Travinh [Tra Vinh], ary any atsimo sy atsimo-atsinanana atsinanan'ny Ranomasina Atsinanana. Ny tanin'ny faritany dia noforonina tamin'ny alàlan'ny fametrahana ny rantsany telo tamin'ny renirano Mekong [Mê Kông] izay mamakivaky ny faritany mankany amin'ny Ranomasina Atsinanana, sy ny fasika izay arosin'ny tondraka avo mandritra ny avaratra-atsinanana Monson. Misy fitambaran-tany ambany lainga novolavolain'ny molotra mitambatra sy ny gondron 'ny sandy, tany anaty pasika taloha. Rakotra tanimboly ny tehezan'ny rachs, izay somary avo noho ny lemaka, ary ny ankamaroan'ny ao anatiny dia misy ny voaniho voankazo, ary ambonin'ny safo-drano. Avy amin'ireo renirano lehibe telo amin'ny renirano, ny Co Chien [Cổ Chiên], ny Hamluong [Hama lượng] ary ny EFITRANO [Ba Lai] izay mandeha amin'ny faritany avy any avaratra ka hatrany atsimo amin'ny tsipika mifanitatra, renirano kely sy lakandrano vitsy no mandeha, ary izany no antony tena ilaina amin'ny fiainana sy ny fiompian'ity firenena ity. Ny velarantanin'ny velarantany 170.000 dia hektara, ary mponina 257.216.
Toy ny toerana rehetra any Cochin-Sina, ny ony no tena mahomby amin'ny famitana. Ny renirano tena lehibe indrindra ao amin'ny Ny nosy Bao, manomboka any avaratra, dia:
The Soc Sai rach [rạch Soc Soài], na mikoriana;
The Bentre [Ben tre] ony, nantsoina taloha hoe ny lakana My Long [rạch Mỹ Longizay misy ny tanànan'ny faritany. Io dia iray amin'ireo renirano lehibe indrindra, misy renirano maro mifarana ao amin'ny vohitr'i Huong Diem [Hương điểm], eo afovoan'ny nosy;
The Zanaka Doc [Sơn Đốc];
The Cai Bong [Cái Bóng] mikoriana, miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina Kristiana;
The Batri rach [rạch Ba Tri], izany no lalan-drano mankany amin'ny tsenan'i Batri [Ba Tri], ny zava-dehibe indrindra any atsimon'ny Nosy. Ireo renirano rehetra ireo dia mikoriana ao amin'ny Hamluong [Hama lượng] renirano.
Ao amin'ny nosy Minh, misy avaratra:
The Caimon [Cai Mon] renirano, mivezivezy hatrany sy eo anelanelan'ny banky zaridaina mahavokatra, izay ivon'ny vondron'ny kristiana lehibe sy manankarena;
The Mocay [Mỏ Cày] marika, izay eo anilan'ny tanànan'ny Mocay [Mỏ Cày] fizarazarana, ary iza no tsena lehibe indrindra ao amin'ny nosy;
The Cai Quao [Cái Quao];
The Tan Hung [Tân Hưng];
The Giong Luong [Giồng Luông];
The Bang Cung [Bàng Cung]. Ireo renirano enina ireo koa dia mikoriana ao amin'ny Hamluong [Hama lượng]. Farany, ny Cai Chat [Cai Chat] izay mandeha amin'ny alàlan'ny Co Chien [Cổ Chiên] alavitra lavitra ary tonga any amin'ny farany io renirano io. Ity rafitry ny làlana ity dia nampitombo ny lakandrano arakaraka ny takian'ny varotra sy ny fambolena.
II. Jeografia ara-toekarena
Ny faritanin'i Bentre [Ben tre] nahatratra ny fivoarany ara-toekarena tanteraka fa na aiza na aiza misy azy dia tsy misy vokatra. Amin'ny faritry ny velarany 154.000 ha, 90.000 no ampiasaina amin'ny fambolena vary, ny fifandanjana dia mizara ho zaridaina, fambolena voanio ary giong eo ambanin'ny fambolena samihafa, voasokajy ho zava-dehibe faharoa. Mahatratra 150.000 taonina ny famokarana vary. Ny fambolena voanio dia mitoetra 4.000 ha hekitara ary mamoaka copra 6.000 taonina. Ny zavamaniry hafa dia mamboly mangoustans, voasary, mandarins, hazo sapota betel nut, arecas, fary toy ny tany, ary mitahiry tany 2.000 ha. Ny voankazo nitombo teo Cai Mon [Cai Mon] dia malaza noho ny kalitao sy ny habetsahany. Cai Mon [Cai Mon] manana koa vondrom-piarahamonina kristiana lehibe sy miroborobo.
Ny herinaratra an'ny M. LABBE, izay manome hery ilaina handrehitra ny tanànan'ny Bentre [Ben tre];
Endrika fanalana toaka amin'ny vary, avy amin'ny orinasa sinoa;
Sahan-tany Tvo sy milina famatsiana valo, fananan'ny sinoa ihany koa;
Sangan'iny fahafito, notarihin'ny Annamites ary tena malaza amin'ny faritany mifanakaiky. Fianakaviana 300 mahery ao amin'ny cantons any Batri [Ba Tri] sy Minh Tri [Minh Tri] manohana ny tenany amin'ny fanjonoana, ao anaty ranomasina ary am-bavan'ny ony EFITRANO [Ba Lai], Hamluong [Hama lượng] sy Co Chien [Cổ Chiên]. Ny fanondranana isan-taona mankany Saigon [Sai Gòn] sy Cho Lon [Cho Lon] manodidina ny 100.000kg ny sombin-kibo maina sy voanjo, 20.000kg ny trondro kely izay ampiasaina ho zezika ary trondro maina 2.000;
Ireo fivarotana firavaka firazanana kely dia saika hatraiza hatraiza, ary koa orinasa afovoany am-polony; 6. Ny indostrian'ny silk dia tena ao amin'ny distrikan'i Batri [Ba Tri], izay saika misy ny mpihaza kankana silaka saika, ary ny 200 ny fiadiana amin'ny rafi-pitiavana frantsay, ary ny volom-borona 8, ny 90 kosa ny rotsa amin'ny rafitra frantsay, ary ny 9 amin'ny rafitry ny Annamite. Ity indostria ity dia azo inoana fa hamolavola be tato anatin'ny taona vitsivitsy, satria ny fanjakana nanampy sy nampahery azy nanomboka tamin'ny herintaona. Modely silk w orm nursery dia efa natsangana tao amin'ny kanton de Bao An [Bao An], ary hiasa amin'ny filaminana raha vao vita ny fampitaovana ilaina.
Ny fanondranana ihany no misy ny paddy sy copra. Amidy eny an-toerana eo amin'ny mpivarotra sinoa sy amin'ny Annamita vitsivitsy izy ireo izay mandroso azy ireo Saigon [Sai Gòn] sy Cho Lon [Cho Lon]. Antenaina ny hisian'ny syndicat fambolena fa handray an'ity orinasa ity ary amin'ny alàlan'ny Annamites dia hanaisotra ny tenany amin'ireo mpisolovava sinoa manahirana.
Mitovitovy amin'ny ankamaroan'ny faritany tandrefana, Bentre [Ben tre] dia miforona amin'ny giong sy tanimbary be, ary tsy manana fahalianana mahaliana ilay mpandeha.
(Visited 1,632 fotoana, 1 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← CHỮ NÔM na ny sora-tanana taloha Vietnam ary ny fanomezana taloha tamin'ny literatiora Vietnam - Fizarana 4
Fitsidihana anio: 356
Total visits: 420,582